Roobab mahiigaan ah oo ka da?ay gobollada Puntland. – Radio Daljir
Roobab mahiigaan ah oo ka da?ay gobollada Puntland.
Oktoobar 13, 2009 12:00 b 0
Galkacyo, Oct 13 – Roobab xooggan oo mihigaan ah ayaa ka da?ay deegaanno badan oo ka tirsan Puntland, kuwaasi oo ay ka mid yihiin qaar ma mid ah magaalooyinka waaweyn ee Puntland sida Galkacyo, Garoowe, degmooyin iyo dhul miyi ah oo aad u baaxad weyn.
Roobabkaan oo si siman uga da?ayey gobollada Mudug iyo Nugaal iyo meelo badan oo ka mid ah gobollada Sool iyo Sanaag ayaa da?yey muddo saacado badan ah, waxayna maasheeyeen dhul badan oo miyi iyo magaalaba iskugu jira.
Roobabkaan oo ahaa kuwii dayrta, ayaan la sheegin wax khasaare ah oo ay gaysteen saacadihii badnaa ee ay da?ayeen marka laga reebo dadka qaxootiga ah oo ka cabanaya xooshadahoodii oo daadadku cagta mariyeen, waxaana siweyn ugu diirsaday dadweyanaha miyiga iyo kuwa magaalooyinka oo todobaadadii ugu danbeeyey uu saameeyey kulayl ka soo faafaya kicinka cirta iyo curashada roobabka.
Gobolka Mudug, waxaa uu ka mid ahaa meelaha muddooyinkii ugu danbeeyey laga soo sheegayey abaaro saamayn weyn ku yeeshay nolosha dadka iyo duunyadaba, hase ahaatee xilligaan dhammaan meelihii abaaraha laga soo sheegayey waa ay doogsadeen waxaana ceegaagta Xareed baraagaha iyo meelaha kale ee biyo qabatinta leh.
Waddooyinka waa weyn ee magaalooyinka Galkacyo iyo Garoowe, waxaa saakay lagu arkayey biyo jiifa oo ay si dirqi ay ku marayaan gaadiidku halka dadkuna ay ka quusteen marista waddooyinka qaar.
Maamullada dawladaha hoose ee magaalooyinka Galkacyo iyo Garoowe, ayaa maanta ku mashquulsanaa la tacaalidda biyahaasi, waxaana waddooyinka qaar lagu shubayey ciid si ay ugu sahlanaato marista dadka iyo gaadiidka.
Booyadaha ayaa iyaguna xareedda ka soo daabulayey daafaha magaalada iyo meelaha balliyada ah ee ay xareeddu fariisato, kuwaasoo ku shubayey Baraagaha guryaha iyo goobaha kale ee looga baahan-yahay.
Roobabkaan xoogga leh ee haatan ka da?ay meelo badan oo ka mid ah deegaannada Puntland, waxay ku soo beegmeen iyadoo meelaha badan oo ka mid ah gobollada, degmooyinka iyo waliba dhulka miyiga ahba ay ka jirto cabashooyin biyo iyo baad-la?aaneed.
Mudanayaal ka tirsan baarlamaanka Somaliya oo dhaliilay safarada dibedda ee M/weyne Shariif.